महिलालाई किन उपप्रमुख मात्रै?
जुना घर्ती print
यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वमा ४० प्रतिशत हुने सुनिश्चित छ। महिला सशक्तिकरण र समानताका संघर्षमा यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा हो।
स्थानीय तहमा प्रमुख तथा उपप्रमुख एक जना महिला हुनैपर्ने प्रावधान संविधानमा छ। तर राजनीतिक दलहरू महिलालाई स्थानीय तहमा प्रमुख पद दिन तयार देखिँदैनन्। पुरूषहरूकै नेतृत्वमा चलेका दलहरूले पुरुषलाई मात्रै सक्षम देखिरेहका छन्। महिला कमजोर हुन्छन् र नेतृत्व लिन सक्दैनन् भन्ने डर उनीहरूलाई छ। महिला अगाडि आए आफ्नो वर्चश्व गुम्ने खतरा पनि उनीहरूले महशुस गरेका हुनसक्छन्।
नेपालमा पुरुषको भन्दा महिलाको जनसंख्या धेरै अर्थात् ५१ प्रतिशत छ। अझ अहिले त मतदाता धेरै महिला नै छन्। धेरै पुरुष मतदाता वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले उनीहरूले यसपटक मतदान गर्ने छैनन्। यति हुँदाहुँदै संविधानले सुनिश्चित गरेकै ४० प्रतिशतभन्दा महिला उम्मेद्वारी धेरै हुन नसक्नुमा राजनीतिक दल हाँकिरहेका पुरूषहरूमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच कारण बनेको छ।
यही पितृसत्तात्मक सोचका कारण सक्षम महिलाले नेतृत्व गर्ने अधिकार पाएका छैनन्। महिलालाई राजनीतिक दलबाट नै उपमेयर र उपाध्यक्षमा थन्काउने मनोविज्ञान बढी देखियो। दलहरू महिला सक्षम छन् भन्ने पुष्टि गर्न चाहन्थे भने प्रमुख वा अध्यक्षमा उम्मेद्वार बनाउन तयार हुनुपर्थ्यो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, समामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भएको मुलुकमा महिलाहरू नगर प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन किन सक्दैनन्? महिलालाई उम्मेद्वार किन नबनाउने? स्थानीय तहमा पनि भण्डारी, घर्ती वा कार्कीजस्ता सक्षम महिला धेरै छन्। उनीहरूलाई अवसरको खाँचो छ।
राजनीतक दलको नेतृत्व गररिरहेका पुरुषहरुले बुझ्न आवश्यक छ, महिलाहरु अब समाजको हरेक क्षेत्रको नेतृत्व गर्न सक्छन्। यसका लागि उनीहरूलाई अवसर चाहिएको छ। उपमेयर र उपाध्यक्ष चलाउने महिलाले मेयर र अध्यक्ष पनि चलाउँछन्।
हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई समावेशी बनाउन महिला तथा दलित महिलालाई प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ। यसैअनुरुप प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला प्रतिनिधित्वसमेत अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यसमा एउटा प्रश्न छ, दलित महिला उम्मेदवार नभएको खण्डमा के गर्ने? कुनै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नहुन सक्छन्। दलित महिला नभएको ठाउँमा विकल्पका रुपमा सीमान्तकृत अल्संख्यक महिलालाई स्थान दिइएको भए उपयुक्त हुने थियो।
हाम्रो समाजमा जति पुरुषलाई राजनीति गर्न सजिलो छ, महिलालाई त्यति नै गाह्रो छ। महिलाले हरेक कुरामा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। एकातिर पारिवारीक संरचनाले असर गर्छ, अर्कोतर्फ सामाजिक संरचनाले। यी असरहरुसँग संघर्ष गरेर नै महिलाहरु २१औं शताब्दीको नयाँ नेपाल बनाउने यो महायज्ञमा होमिन तयार छन्।
चुनौतिमाझ पनि जति महिला उम्मेदवार भएका छन्, उनीहरूले आफूलाई पुरुष उम्मेदवारभन्दा कमजोर नठानी प्रतिस्पर्धा गर्नु आवश्यक छ। पुरुषजस्तै चुनावी मैदानमा होमिनु जरूरी छ। यसले नै राजनीतिक दलका नेतालाई पनि थाहा हुन्छ, महिलालाई प्रमुख वा अध्यक्ष नदिएर भूल भयो। त्यसैले आउने दिनमा महिलाको नाम उपमेयर र उपाध्यक्षमा होइन मेयर र अध्यक्षमा आओस्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख २६, २०७४ १९:००:२४